जोड दिनमै बर्सेनि किन पोलिन्छन् चेपाङ बालबालिका ? - Dainik Nepal
जोड दिनमै बर्सेनि किन पोलिन्छन् चेपाङ बालबालिका ?
दैनिक नेपाल २०७४ पुष २८ गते ७:११
चितवन, २८ पुस । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका १, थाप्राङका श्याम चेपाङले छोरीको नाम खुइलीमाया राखे । आगोले पोलेर कपाल खुइलेका कारण १० वर्षीया ती बालिकालाई गाउँमा सबैले ‘खुइली’ नै भन्छन् । दुई वर्षको हुँदा उनलाई आगोले पोलेको हो । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।